Ongororo yekufa kwavaMujuru yakapera
Kuongororwa kwekufa kwevaimbova mutungamiri wemauto vaSolomon Mujuru kwakapera musi weMuvhuro apo mutongi wedare diki vaWalter Chikwanha vakati mhuri iyi inoda kuti chitunha chifukunurwe iyende nechichemo chayo kugweta rehurumende.
“Handisi kuzopa raidzo yekuti chitunha chifukunurwe. Ndinoda kumboongorora zvandakapihwa ndozopa maonero angu. Asi dare rino haripe simba rekuti chitunha chifukunurwe,” vakadaro vaChikwanha.
Mhuri yekwaMujuru yakati haina kufara nemutongo uyu.Vakangumisira vatsvaka vamwe vanoongorora zvekufa kwevanhu vanobva kuSouth Africa.
Gweta remhuri yekwaMujuru rakati izvo ongororo iyi yapa vanhu zvimwe zvavainge vasinga zivi vakati vamirira kutonga kwedare. Paongororo yapera pakaonekwa vanhu vachipa nhoroondo dzaipikisana nezvemusi wakafa vaMujuru.
Vamwe vaiti pakadzwa kurira kwepfuti vamwe vachiti aive ari marata embe aiputika.Vamwewo vakati vaMujuru vainge vaine mhunu wavaifamba naye vamwe vachiti rainge riri bhachi rai-ita semunhu.
VekuZesa vakati magetsi haasiri iyo akakodzera moto ukuyo vapupuri vemapurisa vaiti aive arimagetsi.
Nyadzvi dzakabva kuSouth Africa dzakati hadzaikwanisa kupa ruyamuro nekuti umboyo hwakatsakatika nekuda kwekutadza kubatwa namapurisa Muongorori vanobva kuCuba avo vakaongorora chitunha chavaMujuru vakati vakatadza kuona chakakodzera kufa kwavaMujuru nokuda kwekuti painge pasina ropa nekuda kwekuti pakanga pasara madota chete.